विश्व श्रवण दिवसः के कारणले गुम्छ श्रवणशक्ति? – Health Post Nepal
विश्व श्रवण दिवसः के कारणले गुम्छ श्रवणशक्ति?
२०७८ फागुन १९ गते १४:४९
काठमाडौं–बिहीबार ३ मार्चका दिन विश्वभर ‘विश्व श्रवण दिवस’ मनाइँदैछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्यांकअनुसार विश्वका १ अर्ब ५० करोड मानिसहरु कुनै न कुनै खालको कान नसुन्ने समस्याबाट पीडित छन्।
यसमध्ये १ अर्ब १६ लाख मानिसहरु मध्यमखालको श्रवणशक्ति ह्रासको समस्याबाट पीडित छन् भने ४३ करोड मानिसहरु अर्थात् विश्वको कूल जनसंख्याको ५ दशमलब ५ प्रतिशत उच्च खालको श्रवण समस्या बेहोरिरहेका छन्। यस्तै, पूर्ण रुपमा कान नसुन्ने जनसंख्या भने १ करोड ६ लाख छ।
यस्तै, मध्यमदेखि उच्च खालको श्रवण समस्याबाट पीडितहरु सबैभन्दा बढी पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा छ। त्यहाँ १३ करोड ६५ लाख मानिसहरु श्रवण समस्याबाट पीडित छन्। अमेरिकामा ६ करोड २७ लाख, अफ्रिकामा ३ करोड ९९ लाख, युरोपमा ५ करोड ७३ लाख, दक्षिणपूर्वी एशियामा १० करोड ९४ लाख पीडित छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा यो संख्या ६ करोड ३० लाख छ। नेपालमा भने १८ दशमलव ८ प्रतिशत जनसंख्यामा कानको रोग तथा समस्या भएको एक अध्ययनले देखाएकाे छ
श्रवणशक्तिमा आएको ह्रासका कारण मानिसहरुको जीवन, परिवार, समाज र मुलुकमै असर परिरहेको हुन्छ। डब्लुएचओको तथ्यांकअनुसार श्रवण समस्याका कारण विश्वभर बर्सेनि ९८० बिलियन डलर खर्च भइरहेको हुन्छ। जुन श्रवण समस्यामा परेका मानिसको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाजस्ता कुरामा खर्च भएको हुन्छ।
कसरी हुन्छ कान खराब?
कान नाजुक अंगमा एक हो, जसलाई बेला–बेलामा हेरविचारको आवश्यकता पर्छ। तर, जीवनशैलीका कारण केही दशकयता मानिसहरुको श्रवण क्षमता निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये ठूलो आवाजमा हेडफोन सुन्ने बानी एक मानिन्छ। कानको सुन्ने क्षमता राम्रो बनाइराख्न केही विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक मानिन्छ। थाहा पाऔं मानिसहरुका केही बानी, जसबाट बहिरोपन निम्तन सक्छ।
धूमपानले मानिसको कलेजोलाई मात्र नभई कानलाई पनि गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्छ। अध्ययनहरुका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थमा पाइने निकोटिनले कानमा हुने रक्तसञ्चार प्रणाली अवरुद्ध पार्छ, जसका कारण कानका कोशिकाहरुमा हानी पुग्छ। ‘सेकेण्डह्याण्ड’ धूमपानका सम्पर्कमा आउने किशोरमा पनि श्रवण क्षमतामा असर पर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ। धूमपानका कारण टिनिटस (कान बज्ने समस्या) पनि बढ्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
कटन इयरबड्सको अत्यधिक प्रयोग
धेरैजसो मानिसहरु कान सफा गर्न कट्न एयरबड्स प्रयोग गर्छन्। तर यो प्रयोग गर्दा हुने असावधानीबाट कानको एयरड्रम्समा प्वाल पर्न सक्छ। जसबाट सुन्ने क्षमता गुम्न सक्छ। त्यसैले कान बढी फोहोर भयो भने आफैंले सफा गर्नेभन्दा विशेषज्ञको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ।
हेडफोडको बढी प्रयोग
इयरफोन, हेडफोनजस्ता विभिन्न अडियो उपकरणको असावधानीपूर्वक र बढी प्रयोगले पनि कानमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ। ठूलो आवाजमा हेडफोन सुन्दा कानको पर्दामा क्षति हुन सक्छ। विशेषज्ञहरु ६० प्रतिशतभन्दा कम भोलुममा मात्र हेडफोन सुन्ने सल्लाह दिन्छन्।
कानको समस्यालाई बेवास्ता
यदि कान नराम्रोसँग दुख्छ, आवाज सुन्न समस्या हुन्छ, कान बज्ने समस्या छ भने बेवास्ता गर्नुहुन्न। यस्तो अवस्थामा तत्काल विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ। बेवास्ता गर्ने हो भने पछि गएर बहिरो बन्ने सम्भावना हुन्छ।